पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना सुरु - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
| १ कार्तिक २०७५, बिहिबार
पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना सुरु
नेपालखबर काठमाडौं मंसिर २१
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लाहरुमा साँझ पाँच बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ। पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ७४ क्षेत्रमा मंसिर १० गते निर्वाचन भएको थियो। पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो।
सिन्धुपाल्चोकमा मतगणनाको तयारी पूरा भएको छ। उम्मेदवार तथा प्रतिनिधिहरु गणनास्थलमा आइपुगेका छन्। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा मतगणनाको तयारी सुरु भएको छ।
क्षेत्र नम्बर १ को महिला तथा बालवालिका कार्यालयमा र २ को जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा तारबार सहित गणना सुरु गर्न लागिएको हो। मत गणना गर्ने कर्मचारी जाली भित्र छन् भने दल तथा उमेद्धवारका प्रतिनीधि जाली बाहिर छन्।
गोरखा २ पहिलो चरण निर्वाचनको सबैभन्दा चर्चित क्षेत्र हो। यो क्षेत्रबाट माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिस्पर्धामा छन्। सो क्षेत्रको मतगणना पनि सुरु गरिएको छ।
जाजरकोटमा पनि मतगणना सुरु भएको छ। जिल्ला सदरमुकाममा राखिएका मतपेटिका गणनाका लागि खोलिएको छ। दार्चुलामा पनि मगणना केही बेरमा सुरु हुँदैछ।
रसुवामा मतगणना सुरु गरिंदै
दोलखामा अहिले साँझ ५ बजे देखि मतगणना सुरु हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतगणनाको सबै तयारी पुरा भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दियो। मुख्य निर्वाच्न अधिकृत एवं जिल्ला न्यायधिश प्रकाश कुमार काफ्लेका अनुसार जिल्ला अदालत परिसरमा ती कोठा बनाएर मतगणना गरिँदैछ।
रसुवामा पनि मतगणनाको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ। बझाँङमा मतगणना सुरु भएको छ।
खोटाङबमा मत गणनाका तार जाली सहितको फलामे बार हालिएको छ। बिहिबार बेलुका ७ बजेबाट सुरु हुने मत गणनास्थलको सुरक्षाका लागि फलाममा डण्डी र तार जालीले बार हालिएको हो। मत गणनाकाक्रममा सहभागी हुने उम्मेद्वारका प्रतिनिधिलाई सो तारजालीको बारभन्दा बाहिर राखेर मत गणना गरिने सहायक निर्वाचन अधिकृत प्रदीपकुमार उपाध्ययले बताए।
ओखलढुंगामा बिहीबार साँझ ५ बजेपछि मतगणना सुरु हुँदैछ। मत गणनाका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको मूख्या निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा भएको पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र निम्न छन्:
प्रदेश नं १ः सोलुखुम्बु, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ
प्रदेश नं ३ः नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप
प्रदेश नं ४ः मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा,
प्रदेश नं ५ः रूकुम ९पूर्वी भाग० र रोल्पा
प्रदेश नं ६ः रूकुम ९पश्चिम भाग०, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा
प्रदेश नं ७ः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र वैतडी ।
प्रकाशित २१ मंसिर २०७४, बिहिबार | 2017-12-07 17:40:04
सुनसान बन्दै काठमाडौं, २२ लाख मानिस बाहिरिए
दशैंको शुभकामना दिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भने- देश कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ
रअले मेरो हत्या गर्ने षडयन्त्र रचिरहेको छ: श्रीलंकाली राष्ट्रपति
उपत्यकामा आजदेखि प्रहरीको निःशुल्क बस, कहाँ-कहाँ चल्छन् ?
माधव नेपालपछि झलनाथ पनि उभिए सरकार विरुद्ध
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दशैंको शुभकामना दिने बहानामा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको चर्काे विरोध गरेका छन्।
श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेको भारत भ्रमण अघि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले भारतीय गुप्तचर एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘रअ’...
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता झलनाथ खनालले जनअपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
भुटानमा चुनावः थिम्पुको सत्ता नजिक पुगेको नयाँ पार्टी दिल्लीसँग कति टाढा?
बाह्य विश्वले चासो साथ हेरिरहेको भुटानको अन्तिम चरणको निर्वाचनका लागि बिहीबार मतदान हुँदैछ।
मधेशको अधिकारका लागि राजपा प्रतिवद्धः भण्डारी
राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरदसिंह भण्डारीले मधेश र मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताएका...
दशैँ भन्ने बित्तिकै धेरैको दिमागमा लामो विदा, आफन्तसँगको भेटघाट र उल्लासका दृष्य नाच्छन्। विमानलाई आकाशमा उडाउने पाइलटको कथा भने फरक छ। उनीहरुका...
दशैँ कसको, टीका कस्तो?
नेपालमा नेवार जातिले सबैभन्दा पहिले रातो रंग प्रयोगमा ल्याएका हुन्